Meyd laga helay duleedka Magaalada Dhuusamareeb – Radio Baidoa
Wararka laga helayo deegaan duleedka ka ah Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug oo lagu Magacaabo Bohol ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi lagu arkay meydka Gabar yar oo da’ahaan lagu qiyaasey 12 Jir.
Ciidamada Booliska ka howlgalla Magaalada Dhuusamareeb ayaa tegay deegaanka Bohol,iyaga oo halkaasi kasoo qaadey meydka Gabadha Yar sidoo kale ay falkaasi u soo qabteen Hooyada Dhashay Gabadha yar iyo Seeygeeda.
Wararka ayaa waxaa ay intaais ku darayaan in gabadaha uu ka muuqdo jirdin xoogan oo sababay inay geeriyooto,waxaana weli la ogeyn sababta ka dambeeysa in Gabadaasi yar la dilo.
Saraakiisha Ciidanka Booliska Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegeen inay baaritaan ku hayaan Hooyada dhashay gabadha iyo Seeygeeda oo ay ku tuhmayaan inay dilkaasi ka dambeeyeen,isla markaana ay hataan ku xiran yihiin Saldhiga Booliska Dhuusamareeb.
Qaar kamid ah Shacabka ku nool deegaanka bohol ayaa aad uga walaacey dilka Gabadha yar,iyada oo ay aheyd dhacdadaan middii ugu horeeysay ee ka dhacda,waxaana ay dalbadeen inay cadalaad hesho.
Gudoomiye Najax Oo Magacaabis Sameeyey